Gịnị Mere My iMessage anaghị arụ Ọrụ Na My iPhone? Idozi! - Iphone
kedu otu esi ehichapụ ụlọ ahịa ngwa
melite ntọala ikuku ikuku verizon
kedu ka m ga -esi nweta iphone m ka ọ tụgharịa n'akụkụ
iphone cant achọta wifi network
Gịnị Mere My iMessage anaghị arụ Ọrụ Na My iPhone na iPad? Nke a bụ Ndozi ahụ!
Bulu acha, afụ na-acha akwụkwọ ndụ. Ọ bụrụ na ị na-anwa izipu iMessages iji iPhone gị na ozi gị niile na-apụta na mberede na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ egosipụta, mgbe ahụ iMessage anaghị arụ ọrụ nke ọma na iPhone gị. N'isiokwu a, m ga-akọwa ihe iMessage bụ na esi chọpụta na idozi nsogbu na iMessage na iPhone, iPad, na iPod gị.
Gịnị Bụ iMessage na Olee Otú Ọ Na-arụ ọrụ?
iMessage bụ azịza Apple nyere Blackberry Messenger, ọ dịkwa iche karịa ozi ederede ọdịnala (SMS) na ozi multimedia (MMS) n'ihi iMessage na-eji data iji zipu ozi kama ịhazi ozi ederede site na ndị na-eweta ọrụ ekwentị gị.
iMessage bụ nnukwu atụmatụ n’ihi na ọ na-enye ohere ka iPhones, iPads, iPods, na Macs ziga ozi gafere oke ọdịnala 160 nke ederede ederede yana oke data metụtara ozi MMS. The isi drawback nke iMessage bụ na ọ na-arụ ọrụ n'etiti Apple ngwaọrụ. Ọ gaghị ekwe omume izipu iMessage na onye nwere ama gam akporo.
Gịnị bụ Green Bubbles na Blue Bubble On iPhones?
Mgbe ị mepee ngwa Ozi, ị ga-achọpụta na mgbe ị na-eziga ozi ederede, mgbe ụfọdụ a na-eziga ha na-acha anụnụ anụnụ na oge ndị ọzọ a na-ezigara ha na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Nke a bụ ihe nke ahụ pụtara:
Ọ bụrụ na ozi gị pụtara na-acha anụnụ anụnụ, mgbe ahụ, ezitere ozi ederede gị site na iji iMessage.
Ọ bụrụ na ozi gị na-egosi na a akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ afụ, mgbe ahụ gị ozi ederede e zigara iji gị cellular atụmatụ, ma na-eji SMS ma ọ bụ MMS.
Chọpụta Nsogbu Gị na iMessage
Mgbe ị na-enwe nsogbu na iMessage, ihe mbụ ị ga-eme bụ ịchọpụta ma nsogbu ọ dị na otu kọntaktị ma ọ bụ na iMessage anaghị arụ ọrụ na kọntaktị ọ bụla na iPhone gị. Ọ bụrụ na iMessage anaghị arụ ọrụ na naanị otu kọntaktị gị, nsogbu kachasị dị na nke ha ọgwụgwụ. Ọ bụrụ na iMessage anaghị arụ ọrụ na kọntaktị gị ọ bụla, nsogbu kachasị dị na nke gi ọgwụgwụ.
Zipu Ozi Ule
Chọta onye ị maara nwere iPhone nke nwere ike izipụ ma nata iMessages nke ọma. (Ikwesighi ile anya nke oma.) Mepee Ozi ma zigara ha ozi. Ọ bụrụ na afụ ahụ bụ acha anụnụ anụnụ, mgbe ahụ iMessage na-arụ ọrụ. Ọ bụrụ na afụ ahụ na-acha akwụkwọ ndụ, mgbe ahụ iMessage anaghị arụ ọrụ ma iPhone gị na-ezipụ ozi site na iji atụmatụ cellular gị.
iMessage Nke Order?
Ọ bụrụ na iMessage na-arụ ọrụ na iPhone gị, mana ozi ị natara nọ na usoro adịghị mma , lelee edemede anyị banyere otu esi edozi nsogbu ahụ.
Etu esi edozi iMessage Na iPhone ma ọ bụ iPad gị
1. Tụgharịa iMessage Gbanyụọ, regharịa, wee laghachi na
Isi na Ntọala -> Ozi wee pịa bọtịnụ n’akụkụ iMessage gbanye iMessage na iPhone ma ọ bụ iPad gị. Na-esote, jigide bọtịnụ ike ruo mgbe ị hụrụ 'Slide to Power Off' wee pịgharịa mkpịsị aka gị n'ofe mmanya iji gbanyụọ iPhone ma ọ bụ iPad gị. Tụgharịa ngwaọrụ gị na, laghachi na Ntọala -> Ozi , ma gbanye iMessage azụ. Ndozi a dị mfe na-arụ ọrụ otutu oge.
2.Jide n'aka na iMessage edoziri nke ọma
Isi na Ntọala -> Ozi wee pịa iji mepee ihe menu a na-akpọ ‘Zipụ & Anata’. N'ebe a, ị ga-ahụ ndepụta nke nọmba ekwentị na adreesị email ndị ahazi iji zipu ma nata iMessages na ngwaọrụ gị. Lee n'okpuru ngalaba akpọrọ 'Malite Mkparịta ụka Ọhụrụ Site', ma ọ bụrụ na enweghị akara ngosi na-esote nọmba ekwentị gị, kpatụ nọmba ekwentị gị iji rụọ ọrụ iMessage maka nọmba gị.
3. Tulee Njikọ Internetntanetị gị
Cheta na iMessage na-arụ ọrụ naanị na Wi-Fi ma ọ bụ njikọ data cellular, yabụ ka anyị jide n'aka na iPhone ma ọ bụ iPad gị ejikọrọ na ịntanetị. Mepee Safari na ngwaọrụ gị ma gbalịa ịnyagharịa na weebụsaịtị ọ bụla. Ọ bụrụ na weebụsaịtị ahụ ebupụtaghị ma ọ bụ Safari na-ekwu na ị naghị ejikọ na ịntanetị, iMessages gị agaghị ezipụ.
Ndumodu: Ọ bụrụ na ịntanetị anaghị arụ ọrụ na iPhone gị, enwere ike ijikọ gị na netwọk Wi-Fi nke na-enweghị njikọ intaneti dị mma. Gbalịa gbanyụọ Wi-Fi ma na-ezigharị iMessage gị. Ọ bụrụ na nke ahụ na-arụ ọrụ, nsogbu ahụ dị na Wi-Fi, ọ bụghị na iMessage.
4. Banye na iMessage ma banye azụ
Isi laghachi na Ntọala -> Ozi na enweta na-emeghe 'Send & Anata'. Na-esote, pịa ebe ọ na-ekwu 'Apple ID: (gị Apple ID)' wee họrọ 'Banye'. Banye na iji Apple ID gị wee nwaa izipu iMessage na otu n’ime ndị enyi gị nwere iPhone.
5. Tulee Maka Mmelite iOS
Isi na Ntọala -> General -> Mmelite Ngwanrọ na lelee ịhụ ma ọ bụrụ na e nwere ihe iOS update gị iPhone. N'oge m na Apple, ụfọdụ n'ime ihe ndị kasị nsogbu m chere ihu bụ nsogbu na iMessage, na Apple routinely pushes mmelite lebara iMessage mbipụta dị iche iche na-ebu.
6. Tọgharia Network Ntọala
Okwu na njikọta netwọkụ nwekwara ike ịkpata nsogbu na iMessage, na oge ụfọdụ iweghachi ntọala ntọala nke iPhone gị na nrụpụta ụlọ ọrụ nwere ike idozi esemokwu na iMessage. Iji tọgharịa ntọala netwọk gị iPhone ma ọ bụ iPad, gaa na Ntọala -> Ozuruọnụ -> Tọgharia ma họrọ 'Tọgharia Ntọala Ntọala'.
Okwu ịdọ aka na ntị: Tupu ime nke a, gbaa mbọ hụ na ị maara okwuntughe Wi-Fi gị, maka na ‘Tọgharia Ntọala Ntọala’ ga-ehichapụ netwọkụ Wi-Fi echekwara na iPhone gị. Mgbe iphone gị reghachiri, ị ga-enyerịrị itinye okwuntughe Wi-Fi gị n'ụlọ na ebe ọrụ. Bluetooth nke iPhone gị na Ntọala VPN a ga-ewezigharị ya na nrụpụta ụlọ ọrụ.
7. Kpọtụrụ Nkwado Apple
Ọbụna mgbe m nọ na Apple, enwere oge dị obere mgbe usoro nchọpụta nsogbu niile dị n'elu agaghị edozi nsogbu na iMessage, anyị ga-ebuli okwu a na ndị injinia Apple ga-eji aka ha dozie nsogbu ahụ.
ihuenyo mmetụ iphone akwụsị ịrụ ọrụ
Ọ bụrụ n’ikpebie ịga leta ụlọ ahịa Apple, mee onwe gị amara ma kpọọ ya n’ihu mee ọhụhụ site na Ogwe Genius ka ị ghara ichere gburugburu iji nweta enyemaka.
Ọ bụrụ na ị kwenyere na enwere nsogbu na antenna Wi-Fi nke iPhone gị, anyị na-akwado ụlọ ọrụ mmezi akpọrọ Pulse . Ha ga-ezitere gị onye ọrụ ntanetị dị ka nkeji 60!
Enwere m olileanya na isiokwu a enyerela gị aka idozi esemokwu ị na-enwe na iMessage. M na-atụ anya ịnụ olu gị banyere ahụmịhe gị na iMessage na ngalaba ndị dị n'okpuru.